San Htun's Diary: 2011
တောတွေ လားလိုက်တာနဲ့ရက်ကွက်ထဲကို ခုမှပဲ ခြေဦးပြန်လှည့်ပါတော့တယ်။ Winter Break ၁၀ ရက် အားလပ်ရက်မှာ ခပ်ပျင်းပျင်းရှိ ရေးစရာလည်း ရှားပါးနေတာနဲ့ပရော်ဖက်ဆာ Seifu အတန်းမှာတုန်းက အကြောင်းတွေကို ပြန်တူးဆွလိုက်ပါတယ်။ ပိတ်သတ်ကြီး မှတ်မိမလားဘဲ။ ကျောင်းသားတိုင်း ဖိန့် ဖိန့် တုန်ကြတဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ Seifu ဆိုတာ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၅ မှာ သူ့ အကြောင်း ရေးထားပါတယ်။
ကြုံတုန်း Software Engineering ဘာသာအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ SWE ၊ SE လို့အတိုကောက်ခေါ်ကြတဲ့ဘာသာရပ်က ကွန်ပျူတာမှာ အဓိကကျတဲ့ ဘာသာရပ်ပါ။ ဆော့ဝဲတခုကို ဘယ်လို စနစ်တကျတည်ဆောက်မလဲ။ အင်ဂျင်နီယာတွေ အိမ်တလုံးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲလိုပေါ့။ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ Software Engineering ဘာသာရပ်သင်ခဲ့တုန်းက စာအုပ်ကြီးက အထူကြီး ( ခေါင်းအုံး အုံးအိပ်ဖို့အတော်ကောင်းတာ)။ ဆော့ဝဲတွေကိုလည်း စာရွှက်ပေါ်မှပဲ ဆောက်ခဲ့တာပါ။
NUS မှာတော့ စာတွေ့ လက်တွေ့တကယ်သင်တာပါ။ အင်တန်း မဆင်းခင်တလ ကျောင်းကို တကယ့်ရုံးတက်ချိန်အတိုင်း Formal ရုံးဝတ်စုံဝတ်ပြီး ကျောင်းတက်ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက AD (Application Development) Project က Logic Universtiy Stationery Store Project ။ User ပေးတဲ့ System သဘောကို နားလည်အောင်ဖတ်၊ သူတို့ ဘာလိုချင်တာလဲ၊ မရှင်းလင်းတာတွေ မေးခွန်းထုတ်။
Users တွေဖြစ်တဲ့ တီချယ် Megan ၊ Esther တို့ နဲ့အင်တာဗျူးတာကို ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး ပရော်ဂျက်တာမှာ တိုက်ရိုက်ပြပါတယ်။ တီချယ်တွေက အရေးမကြီးတာတွေ မေးနေတယ်ဆိုပြီး အော်ရင် အပြင်က ကျောင်းသားတွေက ဒီ Customer အတော်အပေါက်ဆိုးတာပဲဆိုပြီး တအုန်းအုန်း။ အထဲက အင်တာဗျူးတဲ့ ကျောင်းသားတွေကတော့ ဟန်လုပ်အပြုံးမပျက်။ Customer is always right. User က အလုပ်ရှင်ပေကိုး။
team တွေအလိုက် အခန်းတွေ ခွဲထားပါတယ်။ ကျောင်းမှာပျော်တာများ အိမ်မှာ အိပ်ရုံသာအိပ်ပြီး တချိန်လုံး ကျောင်းမှာ။ ညဆိုလည်း နောက်ဆုံးဘတ်စ်ကားနဲ့ မှ အိမ်ပြန်ကြတာ။ Locker ထဲမှာ ခေါက်ဆွဲခြောက်ဘူးတွေ၊ မုန့် တွေနဲ့ရိက္ခာက အပြည့်။ ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး Screen Design စဉ်းစားရပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေ ထားမယ်၊ ကလစ်နှိပ်ရင် ဘာတွေ ပေါ်လာမယ်၊ database မှာ ဘာ table ၊ field သိမ်းမယ်။ Designer က ဆိုဒ်ကလေး လှပအောင်၊ Database သမားက ဘာ data တွေသိမ်းမယ်၊ System Analyst က ဘယ်လို Screen Design၊ Software Engineer နဲ့ Programmer က System ကြီး ဘယ်လို အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါတယ်။ ငြင်းကြခုန်ကြပေါ့။
Screen Design အချောသပ် ထွက်လာရင် User တွေကို ပြပါတယ်။ မကြိုက်တာတွေ ဖြုတ်၊ လိုတာတွေ ထည့်လို့User ကျေနပ်ရင် စကုတ် ( Coding) ပါပြီ။ ကုတ်တာတော်သူတွေက ခက်တဲ့အပိုင်းယူလို့တာဝန်ကိုယ်ဆီ ခွဲပါပြီ။ Documentation ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ System မှာပါတဲ့ UseCase ( Main Function) ၊ Sequence Diagram (Program Flow) ၊ State Diagram (System Flow) ၊ Description တွေ ရေးရပါတယ်။ နောက် Maintainence လုပ်တဲ့သူက ဒါတွေ ဖတ်ပြီး နားလည်မှာကိုး။
Error ရှိတဲ့အပိုင်းတွေကို ကျော်ခွလို့မနှိပ်နဲ့ပြရုံပဲပြ။ နှိပ်ရင် Error တက်လိမ့်မယ်။ Project Presentation နေ့ မှာ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ presentation လုပ်ပြီး ရှင်းပြပြီး စာအုပ်အပ်ရပါတယ်။ Presentation ပြီးတဲ့နေ့ က East Coast Beach ကိုသွားကာ ဂိမ်းတွေဆော့၊ သီချင်းတွေ ဆိုကာ အတော့်ကို ပျော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ISS ကျောင်းရှေ့ 
Seifu က Problem Statement စာရွှက်တရွက် ပေးပါတယ်။ မနက်ကို စာသင်၊ နေ့ လည်ဆို ပရောဂျက်လုပ်။ လိုတာထက်ကို ပိုသင်တာပါ။ တပတ်ပဲလုပ်ရတဲ့ ပရောဂျက် သေးသေးလေး။ ဒါပေမဲ့ သူသင်တာတွေ အကုန်ထည့်စေချင်တဲ့ Seifu ၊ ကိုယ်လည်း မသိ သူများလုပ်တာကိုလည်း မကြိုက်တဲ့ Tefsa ကြောင့် ခက်စေပါတယ်။ စန်းစန်း စွာတေးတာကိုပဲ လူတွေကြားတယ် မေးပြီးသားကို ခဏခဏမေး၊ ဟိုလို လုပ်ပါလား၊ ဒီလိုလုပ်ပါလား၊ ငါတော့ မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ Tefsa ရစ်တာကိုတော့ လူမသိဘူးဗျား။
Midterm Exam တုန်းကတော့ ၇၇.၅ ရပြီး တတန်းလုံးမှာ အမှတ်အများဆုံးရပါတယ်။ I got the highest score in the SWE midterm exam because all the smart guys are in ASD class. ဆိုလို့ဆူနမ်၊ ရာမား၊ မိုင်း မပြုံးဘဲ ဝါးလုံးကွဲ ရီလိုက်ကြတာ။ Seifu က အတော် အထင်ကြီးသွားတယ်။ နာကွ .........။ Sequence Diagram ကို လုံးဝမှန်အောင် ဆွဲနိုင်တာကိုး။ NUS မှာတုန်းက အမုန်းဆွဲခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတွေ။ Project Presentation နေ့ မှာ Exception Sequence Diagram ကို အကြောင်းပြု၍ Esaya နဲ့Seifu ငြင်းခုန်လိုက်ကြတာ နာရီဝက်လောက် ကြာပါတယ်။ Seifu အကြောင်းသိတဲ့ စန်းထွန်းတို့ တွေကတော့ လွဲနေတာလေး ထောက်ပြရုံက လွဲရင် ဟုတ်ကဲ့ခင်ညာ လိုသွားပါတယ်၊ ဟတ်ကဲ့ ဒီလိုဖြစ်သင့်ပါတယ် ဆိုပြီး ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်။
Final Exam မှာ Eclipse IDE မှာ JUint create မရလို့Lab Monitor က ကမ္ဘောဒီးယား Chantrea ကို လာကူညီပါတယ်။ Seifu ရောက်လာတော့ Lab Monitor ရှင်းပြသော်ငြား ဘာလို့မပြင်ဆင်ထားတာလဲနဲ့Chantrea ကို ဆူပါတယ်။ သူလည်း ဘာမှ မလုပ်ရဘဲ Chantrea ခမျာ အချောင်အဆူခံလိုက်ရပါတယ် ။ စက့်အပြစ်မဟုတ်ဘူး နင့်အပြစ်လို့Chantrea ကို အားလုံးက ဝိုင်းစကြပါတယ်။ Seifu..Seifu ဒါကြောင့်လဲ ဖိန့် ဖိန့် တုန်ကြတာကိုး။
ဂျူနီယာ ဗီယက်နမ် Hai Minh Tu ၊ ကမ္ဘောဒီယား Chantrea Wattanakla
နောက်နေ့ကားမောင်းလိုင်စင် ဒုတိယအကြိမ် သွားဖြေတော့ STOP Sign ရဲ့far far away မှာ ရပ်လို့ တဲ့။ ဘမ်းတော့ မဘမ်းလိုက်ဘူး။ လိုင်စင်ရှိတဲ့သူ နင့်အဖော် ဘယ်မှာလဲ မေးတော့ ဟိုနား ခဏသွားတယ်လို့ညာလိုက်တယ်။ အမှန်က တယောက်တည်း သွားဖြေတာ။ ဘာအဖော်မှ မပါ။ အပြန်ကားမောင်းတာ တွေ့ တော့ လိုင်စင်ရှိတဲ့သူ မပါဘဲ မောင်းနေတာ Illegal လို့လှမ်းအော်ပါတယ်။ နောက်တခါဆို တဘွေထဲ ဒိုးလို့မရတော့ဘူး။
ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ Database Management System (DBMS) ကို ပရော်ဖက်ဆာ Bruce Lester နဲ့သင်ရပါတယ်။ Greeting Email လေးက
Dear DBMS student:
ALL students in this course MUST have the textbook by the first day of class. Please buy it right away since it does take some time to ship and be received. If you have to, mail it Express so that you get it on time.
The textbook is Really excellent withavery large amount of practical knowledge that can be used in the marketplace. You will always want to keep this book for your career.
We will use this textbook every day in class, and the exam questions will be based on the knowledge in this textbook. You are spending many thousands of dollars on our courses, so it is wise to spendafew more dollars onabook which will help you gain the necessary knowledge, and thereby getabetter grade in the course.
Authors - Thomas Connolly and Carolyn Begg
Publisher - Addison Wesley
သင်တန်းအတွက် ပိုက်ဆံထောင်ချီကုန်ထားပြီကာမှ ပညာတွေ အများကြီးတိုးကာ အမှတ်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မဲ့ စာအုပ်အတွက် ပိုက်ဆံနည်းနည်းလေး အကျိုးရှိစွာ အကုန်ခံလိုက်ပါတဲ့။ စန်းထွန်းကတော့ ၈၀ ပေးရတဲ့5th edition အစား စီနီယာတွေဆီက ၁၅ ကျပ် ပေးကာ 4th edition ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ သူပြောသလို စာအုပ်က အရမ်းကောင်းတော့ သူ့ ဆီကထက် စာအုပ်ဆီက ပညာပိုရပါတယ်။
Database ကလည်း ကွန်ပျူတာမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ data ဖြစ်တဲ့ bank account ကို ပြိုင်တူ access သုံးရင် ဘယ်လို control မလဲ။ Concurrency Control ၊ Lock အတွေအကြာင်း သင်ရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာဆိုရင် Database Administrator သပ်သပ်ရှိပါတယ်။ Lester သင်တာ ပျင်းစရာကောင်းတော့ ကျောင်းသားတွေလည်း ပျင်းကြတာပေါ့။
Telephone System Indivial Project လုပ်ရပါတယ်။ team တုန်းက ခက်တာတွေ သူများကို ပစ်ပေး၊ လွယ်တာကို အပိုင်စီးတဲ့ စန်းထွန်းတယောက် တယောက်တည်းလုပ်ဆိုတော့ ပစ်ပေးရမဲ့သူ မရှိလို့ဖိစီးပြန်ရော။ Reference လုပ်စရာလည်း မရှိ၊ ဘယ်လိုစလုပ်ရမယ်မှန်း မသိလို့စိတ်တွေဖိစီးကာ အန်၊ စားမဝင်၊ အိပ်မပျော်။ မကြီးက ဘာမှမလုပ်ဘဲ ဝထ္ထုဖတ်ပြီး အိပ်ပျော်အောင် အိပ်လိုက်။ နောက်နေ့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ ဒီလိုနဲ့လက်ပစ်ကူးရင်း ပြီးသွားပြန်ရော။
ရှေ့ လက အမှတ်စာရင်း ထွက်လာပါပြီ။ အားလုံးက စန်းထွန်းအမှတ်ကို စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာက ၅ခါလောက် အတန်းထဲမှာ ချီးကျူးထားတာကိုး။ နောက်ဆုံးဘိတ်မှာ ချော်သွားကာ State Pattern မေးတာကို Singleton နဲ့ရောသွားလို့ဘီပဲ ရပါတယ်။
ASD (Advanced Software Development) အမှတ်စာရင်း ထွက်လာတဲ့နေ့ ကတော့ အတော့်ကို အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျလိုက်ကြတာ သောက်သောက်လဲ။ ၆၀ % ကျပါတယ်။ သူ့ ကိုယ်သူ ကျမယ် နောက်ထပ်တလ ကျောင်းမှာ ဆက်နေမယ်လို့တွေးထားတဲ့ Yanzi ဘီရပြီး အောင်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ က Yanzi ပါးစပ် နားရွှက်ချိတ်လို့ပြုံးဖြီးဖြီးဖြစ်နေတာများ ကိုယ်A ရတုန်းက သူ့ လိုဖြစ်နေခဲ့မှာလို့တွေးပြီး ပြုံးမိသေးတယ် ။ တော်တဲ့သူတွေ၊ ကျမယ်လို့လုံးဝမထင်ထားတဲ့သူတွေက ကျ။ မျက်နှာ မကောင်း။
Chantrea က SWE မှာ C+ ရလို့ကျောင်းမှာ တလဆက်နေပြီး Course တခု ဆက်ယူရပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလလယ်မှာ Course ၂ခုပဲ ရှိပါတယ်။ ASD နဲ့ Software Testing ။ အကျများတဲ့ ASD ကို ရှောင်ကာ Software Testing ယူမှာမို့Seifu နဲ့ထပ်တွေ့ ပါဦးမယ်။ Seifu နဲ့ရေစက် အတော်ပါတယ်။
DBMS စာမေးပွဲပြီးလို့ကားမောင်းလိုင်စင် တတိယအကြိမ် သွားဖြေတော့ မအောင်ပြန်ပါ။ Parallel Parking မကျွှမ်းလို့ ။ ကားချင်းဘေးချင်းယှဉ်ရပ်ပြီး ကားနောက်ကို ပါကင်ထိုးရတဲ့ Parallel Parking က အလေ့အကျင့်လိုပါတယ်။ တခါတုန်းက Yanzi နဲ့ Parallel Parking ကျင့်နေတုန်း အန်ကယ်တယောက်က သူတို့ ကားကို တိုက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် တခြားမှာ သွားကျင့်ပါလားလို့တောင်းဆိုလာပါတယ်။
ကားပိုင်ရှင် မသိအောင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် Parallel Parking ကျင့်ရတဲ့အဖြစ်။ ကိုယ်သာဆိုရင်လည်း လိုင်စင်မရသေးတဲ့ဟာလေးတွေ ကိုယ့် ကားဘေးနားမှာ လာလေ့ကျင့်ရင် ဘယ်တော့များ ဝင်အောင်းမလဲလို့ရင်တမမ ဖြစ်နေမဲ့အဖြစ်။ ကားကောင်းကောင်းတွေနား သွားမကျင့်ရဲဘူး။ ကိုယ့်ကားအာမခံက မဖြစ်ညစ်ကျယ်။ ကားအစုတ်ဆုံးကို ပတ်ရှာပြီး ကျင့်ရတာကလား။
အစကတော့ နှင်းမကျမှီ လိုင်စင်ရရေး တို့ အရေး။ နှင်းကျလို့လိုင်စင်မရရော ကျောင်းကမထွက်ခွာမှီ လိုင်စင်ရရေး တို့ အရေး ဖြစ်ပြန်ရော။ ဒါကြောင့် ပြောပါတယ်။ New Year Resolution တွေ ချလိုက်၊ ဖြစ်မလာလိုက်၊ ပြန်ချလိုက်နဲ့မုန့် လုံး စက္ကူကပ်ပါတယ်လို့ ။ ယုံပြီလား ပိတ်သတ်ကြီး :P ။
နောက်တနှစ်ကူးတော့မယ်။ အချိန်တွေကလည်း အကုန်မြန်လိုက်တာ။ ဘာလိုလိုနဲ့နောက်တလဆို ကျောင်းပြီးလို့အင်တန်းဆင်းရပါတော့မယ်။ Winter Party က ဓာတ်ပုံလေးတွေကို အမှတ်တရအဖြစ် ဒီပို့ စ်မှာရော၊ ရို့ စ်နဲ့သမံစီး တဂ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် ပို့ စ်မှာရော မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ တချိန်ကျရင် ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ကာ စိတ်ဖိစီးခဲ့တာတွေ၊ ပင်ပန်းခဲ့တာတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့နောက်ပြောင်ပျော်ရွှင်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့သတိရနေမိမှာပါ။
Samatha ၊ Elaine ၊ Professor Najeeb
ASD သင်တဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီး Guthrie
ဒီဓာတ်ပုံ၌ စန်းထွန်း ပါ မပါ။ ဘာအရောင် ဝတ်ထားသနည်း။ ဒက်ထိမှန်သောသူများအား 1 cent တိတိ ချီးမြှင့်ပါမည် :P
Friday နေ့ တဝက်မို့Holiday Mood ဝင်ကာ ဖလမ်းဖလမ်းထနေကြတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှေ့ ခြမ်းဆီက သူငယ်ချင်းတွေကို ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ...
ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၁။
စန်းထွန်းရဲ့  နှိပ်ချက်
တောလားတွေ ရေးနေလိုက်တာနဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာကိုတောင် မရေးဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ ရက်ကွက်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်မှန်း သိချင်နေမလားဘဲ။ ဒီဇင်ဘာလမှာ Database Management System (DBMS) ဘာသာကို ပရော်ဖက်ဆာ Bruce Lester နဲ့သင်ရပါတယ်။ Parallel Programming ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်ရေးပြီး အဲဒီဘာသာမှာ ဆရာတဆူဖြစ်တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ က Parallel Programming သင်တာ ကောင်းပေမဲ့ DBMS သင်တာတော့ မကောင်းလှပါဘူး။ ပရော်ဖက်ဆာ Najeeb ၊ Seifu တို့ လို ကြပ်တဲ့ ဆရာတွေနဲ့ကောင်းကောင်းအမောင်းခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေမှာ Lester လို ချောင်တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာနဲ့တွေ့ တော့ ဘီးစီးတဲ့ ဘဝကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ သတိရလို့ဘီးစီးချင်ကြပြန်ရော။
ပရော်ဖက်ဆာ Najeeb ဆို Quiz တွေ ရှိတဲ့နေ့ ဆို ၉ ၄၅မိနစ်ကတည်းက အတန်းစပါတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာ Seifu ကတော့ ၁၀ နာရီ ဒေါင်ဆိုတာနဲ့အတန်းစတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာ Lester က ၁၀ ၁၀ မိနစ် အတန်းစပေမဲ့၁၀ နာရီ ၁၅၊ ၂၀ လောက်မှ အတန်းစတာပါ။ နေ့ လည်ဆိုရင် စာဖတ်ခိုင်းပြီး Homework လုပ်ရပါတယ်။ အိမ်စာကို နောက်နေ့မနက် ၁၀နာရီ အတန်းမတက်မှီ Homework Submit Folder မှာ ကြိုက်တဲ့အချိန်တင်။ ပရော်ဖက်ဆာ Najeeb ကတော့ ည ၉ နာရီနောက်ပိုင်း Homework တင်ရင် လက်မခံတော့ပါ။ ဒီတော့ ကျောင်းသားတွေခမျာလည်း ည၉ နာရီ မတိုင်မှီ Homework ပြီးအောင် အားစိုက်ရပါတယ်။
နေ့ လည်ချိန် စာဖတ်ပြီး Homework လုပ်ရချိန်ဆိုရင် ကျောင်းသားတွေက ဖေ့ဘွတ်ဝင်၊ သီချင်းကို နားကြပ်နဲ့နားထောင်၊ ဗီဒီယိုကြည့်နဲ့အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချကြပါတော့တယ်။ စန်းထွန်းတယောက်လည်း အဲဒီအချိန်ဆို ဖေ့ဘွတ်ဝင်၊ သတင်းကြည့်။ ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်တဲ့ပုံတွေ တပုံချင်းစီကြည့် Like ၊ မန့် ပေး။
အဲဒီနေ့ ကတော့ အိအိက Golden Mile မှာ စားတဲ့ ယိုးဒယားဟင်းပုံတွေ တင်ထားပါတယ်။ ငတ်နေတာ ကြာပြီဆိုတော့ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ရင်း သားရေတွေကျကာ Like ပေါ့။
သြစီက မဝါက သူ့ သမီးလေး ဝင့်ဝါလေးပုံတွေ တင်ထားတာကိုလည်း Like ပေါ့။ ဘေးမှာ ထိုင်နေတဲ့ Yanzi ကတောင် So cute baby တဲ့။ မဝါက ဝင့်ဝါဓာတ်ပုံလေးတွေ ၂.၂၊ ၂.၃ ဆိုပြီး ဝင့်ဝါ ၂နှစ် ၂ လ၊ ၃ လ Folder လေးတွေ ခွဲပြီး တင်ပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ အိုင်ဒီယာလေးပါ။ ဒီဂျစ်ဒယ်တွေ မပေါ်သေးခင် ကင်မရာဆိုတာ တရွာလုံးမှာမှ တလုံး၊ တနှစ်၊၂နှစ်နေမှ တခါလောက် ဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ရှိတဲ့ နယ်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့လို့ငယ်ငယ်က ဓာတ်ပုံဆိုတာ ရှားမှရှား ။ ဟိုင်းကြီး၊ ရွာသစ်၊ စံပြ အိမ်တွေ အပြောင်းအရွှေ့ ရယ်၊ နာဂစ်လက်ချက်ရယ်ကြောင့် ကလေးဘဝတုန်းက ဓာတ်ပုံဆိုတာ မရှိတော့ပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘယ်လိုပုံလဲလို့မေးရင် ဝဝကစ်ကစ်လေးတဲ့။
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ မွေးဖွားတဲ့ ကလေးတွေကတော့ ကံကောင်းလိုက်တာ။ လိုရာသုံးနိုင်တဲ့ ဖုန်း၊ မရှားပါးတော့တဲ့ ကင်မရာတွေကြာင့် တဖျပ်ဖျပ်ပေါ့။ ဓာတ်ပုံလေးတွေ အဲဒီလိုတင်တော့ အဝေးမှာ ရောက်နေပေမဲ့ ကလေးတွေ ကြီးပြင်းလာတာ မြင်တွေ့ ရသလို ကလေးအတွက်လည်း ငယ်ငယ်တုန်းက ဘယ်လိုဆိုတာ ပြန်ကြည့်နိုင်တာပေါ့။
Like ချင်စရာ မကောင်းပေဘူးလား ပိတ်သတ်ကြီး။ နောက်နေ့ မှာတော့ အိအိက tag လာပါတယ်။
စန်းထွန်းရဲ့နှိပ်ချက် (မနက် ၄ နာရီထိုးခါနီး)
notification တွေဆက်တိုက်ဝင်လာလို့ ပထမတော့ silent လုပ်တယ်. vibration ကြောင့်သိနေသေးတယ်.
ကုတင်ဘေးကစားပွဲပေါ်လည်း တင်လိုက်ရော သစ်သားနဲ့ထိလို့ vibration ကပိုဆိုးရော..
နောက်ဆုံး..... ဖုန်းပိတ်လိုက်ရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားတယ်.. :D :D
ပန်းသီးကိုက်တဲ့ အိအိက ဖေ့ဘွတ် notification တွေကို vibration လုပ်ထားတာကိုး။ စတိတ်မှာ နေ့ လည်၊ စလုံးမှာ မနက်။ ကိုယ့်ရဲ့Like တွေကို အိအိကို မနက်အစောကြီး နှိုးနေသလိုဖြစ်နေတာကိုး။ ကိုယ့်သာဆို နာ့ကို အိပ်ရေးပျက်အောင် လုပ်တဲ့ စန်းထွန်းဆိုပြီး ဒေါသပုန် ထလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်း။ မဝါဆီကတော့ ဘာမှ အကြောင်းမကြားလာတော့ သူ့ ပန်းသီးမှာ ဖေ့ဘွတ် notification တွေကို vibration မလုပ်ထားတာပဲလား၊ အားနာလို့မပြောတာဘဲလား။
ကျမ Like မိ အပြစ်ရှိ၏။ မသိလို့Like မိတာ ဆောတီးနော်။ အဲဒီကတည်းက နေ့ လည်ချိန်ဆို ဖေ့ဘွတ်မှာ Like ရမှာ ကြောက်နေလို့:P
ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၁။
နားဝင်ပီယံ သူ့ လက်သံ
၃နှစ်သမီး အရွယ်ကတည်းက စန္ဒရားသင်ခဲ့တဲ့ Yanzi တယောက် စနေနေ့ တဝက် အတန်းပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲ Student Longue ပြေးကာ တနာရီလောက် စန္ဒရားလေ့ကျင့်လေ့ရှိပါတယ်။ သူ စန္ဒရားတီးလေ့ကျင့်တိုင်း စန်းထွန်းက ဘေးကနေ အားတွေ ကျလေ့ရှိပါတယ်။ တခုခုတီးတတ်တယ်ဆိုရင်ပဲ အားကျမိတာပါ။ ကိုယ်က ဝါးလက်ခုပ်တောင် ဖြောင့်အောင် မတီးတတ်တာကိုး။
ရန်ကုန်မှာတုန်းက သီချင်းစာသားမပါဘဲ တီးလုံးသက်သက် သီချင်းစီဒီတွေ ဝယ်နားထောင်ရင် ဘာကြီးတုန်းဟ ပျင်းစရာကြီးလို့သြဘာပေးခံရဖူးပါတယ်။ Spa မှာ အဲဒီသီချင်းတွေ ဖွင့်ထားတာ ကိုယ့်အကြိုက်ပေါ့။
သူ့ နဲ့မတဲ့တယ့် အကိုကို ပစ်ပေးပြီး တို့ မောင်ချောချောလေးကို အပိုင်စီးတဲ့ ယောက်မလေး မိစိမ့်က ကိုယ်ကြိုက်မှန်းသိလို့သီချင်း၂ပုဒ်ပေးလာပါတယ်။ ကိုရီးယား စန္ဒရားပညာရှင် Yiruma ရဲ့Kiss the rain နဲ့ River flows in you ပါ။ စာသင်ခန်းထဲမှာ ပရောဂျက်လုပ်နေရင်း ဖွင့်ထားတဲ့တီးလုံးသံကို ကြားတော့ စန်းစန်း အဲဒါ Yiruma ရဲ့ Kiss the rain မလားလို့ကမ္ဘောဒီးယား Samneng Cheng က မေးလာပါတယ်။ Love me က Kiss the rain ထက် ပိုကောင်းတယ်လို့Samneng က ညွှန်းလာပါတယ်။
သူ့ စန္ဒရားလက်သံလေးက ငြိမ့်ငြောင်းသာယာပြီး နှစ်ခြိုက်သူတွေအတွက်ကတော့ အပန်းပြေစေပြီး မနှစ်ခြိုက်သူတွေအတွက်ကတော့ ပျင်းစရာကြီး ဖြစ်မှာပါ။
ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၁။
ရို့ စ်တဂ်ထားတာ ကြာပါပြီ။ ပရောဂျက်ရယ်၊ စာမေးပွဲရယ် ဘီးစီးနေတာနဲ့ခုမှပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်။ ဒီနေ့ ကနေ ဇန်နဝါရီ ၂ရက်နေ့ အထိ Winter Break ၁၀ရက် ကျောင်းပိတ်ပါတယ်။ အားလပ်ရက်မှာ တချို့ က ခရီးထွက်ကြ၊ တချို့ ကလည်း မိသားစုတွေနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းကြမှာပါ။
သူ့ ဘဲဘဲရှိတဲ့ ဘော့စတွန်ကို သွားလည်မဲ့ မိုင်းနဲ့ဘော့စတွန်မှာ ရှိတဲ့ ဆူနမ်နဲ့ ရာမား၊ Friend Gathering လုပ်ကြပါမယ်။ စန်းစန်း လာ join တဲ့။ ခရစ်စမတ်အခါသမယမို့အစစအရာရာ ဈေးကြီး၊ နေရာတကာ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေပါတယ်။ အစကတော့ လေယာဉ်ခကို မိုင်းက သူပေးမယ်၊ ဆူနမ်ကလည်း သူအလုပ်ရရင် ထည့်ဝင်မယ်လို့ဆိုသော်ငြား ကားဝယ်လိုက်လို့ကဒ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံတပြားမှ မရှိတော့တဲ့ မိုင်း၊ အလုပ်မရသေးတဲ့ ဆူနမ်၊ ဘိုင်ပြတ်နေတဲ့ စန်းထွန်းကြောင့် ဘော့စတွန်ခရီးစဉ် မဖြစ်မြောက်လိုက်ပါ။ ဒီလိုနဲ့ဘော့စတွန်သွား တောမလားလိုက်ရပါ။
ဒီနေ့Computer Science Department က ခရစ်စမတ်ပါတီ လုပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတခုဆီက ခရစ်စမတ်သီချင်းနဲ့သီချင်းအဓိပ္ပာယ်ကို ရှင်းပြရပါတယ်။ အင်အားကြီး နီပေါ၊ တရုတ်၊ ဂျော်ဒန်၊ အီသီယိုးပီးယားကတော့ အုပ်တောင့်ပါတယ်။ တရုတ်တွေကတော့ သူတို့ မှာ ခရစ်စမတ်သီချင်းမရှိပါဘူးတဲ့။ Friend ဆိုတဲ့ သီချင်းကို လူအင်းအားတောင့်တောင့်နဲ့သီဆိုသွားပါတယ်။ သီချင်းအဓိပ္ပာယ်က သူငယ်ချင်းတွေ အတူတကွ ပျော်ရွှင်တာတွေ၊ စိတ်ညစ်တာတွေ ရင်ဆိုင်ပြီး ဖြတ်သန်းသွားကြမယ်တဲ့။
ဘာသာစကားတူတဲ့ ဂျော်ဒန်နဲ့အီဂျစ်ကတော့ Jingle Bells ကို အာရေဗျဗားရှင်းနဲ့ဆိုသွားပါတယ်။ တယောက်ခါးကို တယောက်ဖက်ကာ စီးချက်အလိုက် ခြေထောက်ကို နင်းကာ ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေတာ တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တောင် ဒူဝေချင်သွားတယ်။
အီသီယိုးပီးယားရိုးရာအကကို မြင်တွေ့ လိုက်ရပါတယ်။
နီပါလီတွေကတော့ ခရစ်စမတ် သီချင်း၊ နှစ်သစ်သီချင်းတွေ တင်ဆက်သွားပါတယ်။
မွန်ဂိုလီးယားကလည်း ခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ သီချင်းဆိုပါတယ်။
ဥစဘတ်ကစ္စတန်ကတော့ သူတို့ မှာ ခရစ်စမတ်သီချင်း မရှိပါဘူးတဲ့။ နာမည်ကြီး အချစ်သီချင်းကို သီဆိုသွားပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလည်း သူတို့ မှာ ခရစ်စမတ်သီချင်း မရှိပါဘူးတဲ့။
ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယကလည်း Sanskirt သီချင်းဆိုကာ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ပေမဲ့ ပါကစ္စတန်စကားကို အိန္ဒိယက မသိသလို အိန္ဒိကလည်း ပါကစ္စတန်စကား မသိပါဘူးတဲ့။
တဦးတည်းသော ရွှေမြန်မာ စန်းထွန်းကလည်း ခရစ်စမတ်သီချင်း သီဆိုပါတယ်။ ဘာသီချင်းလို့ထင်ပါသလဲ...
ပျော်ရွှင်သော ခရစ်စမတ်အခါသမယ ဖြစ်ပါစေ။ ကျန်းမာပါစေ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ကောက်ခါငင်ခါ လက်တမ်းစပ်လိုက်တဲ့ ခရစ်စမတ်သီချင်း။ ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့ နော် :P
ခရစ်စမတ်အားလပ်ရပ်မှာ ဘယ်မှမသွားဘဲ အင်တာဗျူးအတွက် ပြင်ဆင်၊ ကိုရီးယားတွေ ကြည့်၊ ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂင်းမယ်လို့သတင်းကောင်းပါးပါတယ်။
သမီးနဲ့မအေ အပြိုင်နွှဲကြစဉ်
Maryam ၊ Samatha
Elaine Guthrie ၊ Julie
စိတ်မလှုပ်ရှားပေမဲ့ပျော်ပါတယ်။ ခရစ်စမတ်သီချင်းလေးတွေ နေရာတိုင်းဖွင့်တာ၊ ခရစ်စမတ်အလှဆင်ထားတွေကို ကြိုက်တယ်လေ ( ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် အရမ်းလှလို့ )။ အပြိုင်အဆိုင်ဈေးလျှော့ချိန်ဆိုတော့ လျှော့ပင်းလို့အတော်ကောင်းသလား မမေးနဲ့ ။
မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ အဲ သီတင်းကျွှတ်၊ တန်ဆောင်တိုင်ဆိုရင်တော့ မီးပုံးတွေ၊ မီးလုံးလေးတွေနဲ့အိမ်ကို အလှဆင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်မှာ အလှဆင်ထားတွေကို ကြိုက်တယ်။
နှင်းဖြူဖြူလွလွလေးနဲ့ခရစ်စမတ်ကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။
ခရီးတွေ သွားချင်ပါတယ်။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ အတူတူဝိုင်းဖွဲ့ ထိုင်၊ စားသောက်ပြီး သူတို့ ကို ခရစ်စမတ်လက်ဆောင် ပေးချင်ပါတယ်။ Volunteer လုပ်ပြီး အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို ကူညီချင်ပါတယ်။
ဈေးလည်း သိပ်မကြီး၊ ကြာရှည်အသုံးတည့်မဲ့လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးချင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ။
၂၀၀၉ နှစ်သစ်ကူးညမှာ တနေကုန် လျှော့ပင်း ညကျမှ ကောက်ခါငင်ကာ West Cost Beach ကို သွား Countdown။ ပြီးတော့ Tent လဲမရှိဘဲ ညီအမနှစ်ယောက် အိပ်လိုက်ကြတာ တုပ်တုပ်မှမလှုပ်။ မနက်၅နာရီ မခိုင်နှိုးတော့မှပဲ နှိုးတော့တယ်။ ၂၀၁၀ MarinaBay Countdown က မီးရှုးမီးပန်းတွေ အတော်လှတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကမ်းခြေမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ တောပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် မီးပုံပွဲဆင်နွှဲရင်း နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။
New Year Resolution တွေ ချလိုက်၊ ဖြစ်မလာလိုက်။ ပြန်ချလိုက်နဲ့ ။ ဒီလိုပဲ လုံးချာလည် လိုက်နေတာပါပဲ။
ခရစ်စမတ်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အတန်းပိုင်ဆရာမအိမ်သွား ဝါးတီးရင်တော့ ခရစ်စမတ်ကဒ် လက်ဆောင်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ခရစ်စမတ်ကဒ်လေးတွေကို ချိတ်ဆွဲပြီး အလှဆင်ထားတတ်တာကိုး။ နှစ်သစ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီး နှစ်သစ်ဆုတောင်းပေးတတ်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်လေး ဖြစ်ပါစေ။
ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၁။
Batam သွား တောလား
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၃၁ ရက်နေ့ က စလုံးကနေ ၄၅မိနစ် ဖယ်ရီစီးရင် ရောက်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Batam ဆီကို သွားလည်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားဗီဇာကလည်း ဟောင်ကောင်ဗီဇာလို ဈေးကြီးပါတယ်။ စင်းဒေါ်လာ ၇၀၊ ၈၀ ပေးရပါတယ်။ ဒါတောင် Single Entry တလ ရတာပါ။ Multiple Entry ဆို ၁၄၀လောက် ပေးရတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ရွှေမြန်မာသာ ဗီဇာလိုတာပါ။ အဲ ဒီတခေါက်တော့ အိုင်တီဒါရိုက်တာ ပြင်သစ်ကြီးလည်း ဗီဇာလိုတယ်။ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်ကတော့ မလိုပေါင်။ အင်ဒိုဗီဇာကတော့ လျှောက်တိုင်း ရပါတယ်။ ဟောင်ကောင်ဗီဇာလောက်တော့ မခက်ပါ။
မလေးဗီဇာကတော့ အေးဂျင့်ဖိုး အပါအဝင် စလုံးဒေါ်လာ ၂၅ ပဲ ပေးရပြီး ဗီဇာတနှစ်ရပါတယ်။ ထိန်ထိန်က အင်ဒိုနီးရှားက Winarto ကို ကြည့်ကာ "မလေးဗီဇာက အင်ဒိုဗီဇာထက် ဈေးလည်းသက်သာ တနှစ်ကြီးများတောင် ကြိုက်သလောက် ဝင်ထွက်" လို့ခနဲ့ ရင် "ဗီဇာဈေးကြီးတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေ မဝင်။ ဟိုတယ်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ မရောင်းရတော့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ လျှော့။ ဗီဇာကို သက်သက်သာသာနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေ အများကြီးဝင်အောင် လုပ်မှ ဟိုတယ်၊စားသောက်ဆိုင်တွေလည်း ရောင်းရ။ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတိုးအောင် လုပ်ရမှာ။ Stupid Government" လို့Winarto က ကောင်းချီးပေးပါတယ်။
၂၀၀၉ စက်တင်ဘာမှာ ဖေ၊ မေ၊ မောင်မောင်တို့စန်းထွန်းဘွဲ့ ယူတာကို တက်ရောက်ဖို့စလုံးကို ရောက်လာကြပါတယ်။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် မလေးရှားကို သွားလည်ကြပါတယ်။ Student Pass သက်တမ်းကုန်လို့Social Visit Visa ထုတ်ပေးထားချိန် စလုံးအပြင်ထွက်လို့ပြန်ဝင်လာရင် ဗီဇာတလပဲ ပေးထားမို့ လို့တလအတွင်း အလုပ်မရရင် ဒွတ်ခ။ မေကလည်း နေသိပ်မကောင်းတာမို့မေ့ကို အဖေါ်လုပ်ပြီး မလေးကို လိုက်ခွင့် မကြုံလိုက်ပါ။
အမှန်က တလကုန်လို့ မှ အလုပ်မရသေးရင် ဗီဇာထပ်တိုးပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံး EPEC ဆိုတဲ့ Long Term Visit Pass တနှစ်လျှောက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး အလုပ်လျှောက်လို့ရတယ်။ Social Visit နဲ့လာပြီး အလုပ်လျှောက်တဲ့သူတွေကတော့ ၂၊ ၃ လပဲ ဗီဇာရတာပါ။ ကျောင်းတက်တဲ့အတွက် ဗီဇာစတေးအတွက် လုံးဝစိတ်မပူလေနဲ့ ။ အလုပ်ရအောင် ရှာပြီး loan တွေ ဆပ်ဆိုတဲ့ သဘော။
တခြားတိုင်းပြည်တွေကို သွားလည်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံက အချိန်မရွှေး ပြန်လာလို့ရတယ်လို့မြှောက်ပေးတဲ့ မေ၊ ရုံးပိတ်ရက်တွေတိုင်း ဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းခေါ်တတ်တဲ့ ဝမ်းကွဲအမကြောင့် သွားလည်ဖို့ကြိုးစားတိုင်း လက်မှတ်မရတာရယ်၊ စတိတ်ကို သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးချိန် မြန်မာပြည်ကို ပြန်တာရယ်၊ ရတဲ့ ခွင့်၂ပတ်ထက် ၄ရက် ပိုယူထားတာရယ်ကြောင့် မလေးကို သွားဖို့လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့မလေးရှားသွား တောမလားလိုက်ရပါ။
Vivo City မှာ ဖယ်ရီဂိတ်ကနေ စထွက်ပါတယ်။ ဒီတခေါက်တော့ မိသားစုတွေ ခေါ်ခွင့်ရှိတာမို့မကြီး ပါတယ်။ ရုံးက အင်ဒိုတွေ Darmawi ၊ Winarto နဲ့သူ့ အမျိုးသမီးက တိုးဂိုက်လုပ်ပါတယ်။ သူတို့ နိုင်ငံမှာ ခရီးသွားတာ အဆင်ပြေအောင် အတော်လေး ဂရုစိုက်ကြပါတယ်။
အကျင့်ပါနေလို့VIP ခန်းထဲ မဝင်ရဲဘူးလေ။ လေက အတော်တိုက်လာလို့VIP ထဲ ဝင်ပြီး စနည်းနာတော့မှ Jerome တို့မိသားစုက အခန့် သား နှပ်နေတာ။ လေပန်းကြရင်း ဖား အဲလေ ဖိလစ်ပိုင်တွေအကြောင်း စပ်စုကြည့်တော့
ဒေါက်တာ ဟိုဆေးရီဇာ (Dr. Jose P. Rizal (စပိန်လို J ကို h ဟု အသံထွက်သည်) က ဖိလစ်ပိုင်တွေရဲ့သူရဲကောင်းပါ။ သူရဲကောင်းဆိုတော့ တို့ ဗိုလ်ချုပ်လို အင်္ဂလိပ်ကို လက်နက်ဆွဲကိုင် လွတ်လပ်ရေးရအောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာများလား။ မဟုတ်ရပါ။ သူတိုက်ပွဲဝင်ပုံက ဖိလစ်ပိုင်တွေ အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်နိုးကြားပြီး နှစ်ပေါင်း၃၀၀ကျော် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ စပိန်တွေကို တော်လှန်ချင်အောင် စာအုပ်၂အုပ် ရေးပြီး အမျိုးသားသူရဲကောင်း ဖြစ်လာပါတယ်။ Pen is mighter than sword ဆိုတာ ယုံပါပြီ။
Jerome ဆို စလုံးနိုင်ငံသား ခံယူထားလို့ဖိလစ်ပိုင်ပတ်စ်ပို့ မရှိတော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ကို ပြန်ရင် ပတ်စ်ပို့မရှိတော့ပေမဲ့လည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားပါပဲတဲ့။ ဘတ်စကတ်ဘောက ဖားတွေရဲ့အသည်းစွဲပါ။ အပတ်တိုင်း ဆော့ကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာက ရုံးသုံးဘာသာ စကားမို့ လို့အီးကောင်းကြပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်နိုင်ငံပါ။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတွေက ဝင်မွှေတတ်ပါတယ်။ JoJo ဆိုရင် ဟိုဖက်ကနေ ဒီဖက်ကို ရွှီးကနဲ မုန်တိုင်းနဲ့ပါသွားတာတဲ့။ Jerome က ဖားသရက်သီးက ယိုးဒယားသရက်သီးထက် ကောင်းတယ်။ ဝက်သား BBQ က အကောင်းဆုံးလို့ညွှန်းပေးမဲ့ တခါမှ မမြည်းစမ်းဘူးပါ။
ဖယ်ရီဂိတ်မှာ ရှိတဲ့ Beef Ball Noodles က အရမ်းကောင်းတယ်လို့Darmawi က ပြောပါတယ်။ စင်းဒေါ်လာ ၂၀၀ လောက် လဲလိုက်ရင်ပဲ မယုံမရှိကြပါနဲ့စန်းထွန်း မီလျှံနာ ဖြစ်သွားပါပြီ :) ။ ငွေကြေးဖောင်းပွတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ထမင်းတခါစား လေးသောင်းအထက် ဘာဝယ်ဝယ် သောင်းချီ။ ပေသီးခေါက်လို့စင်းဒေါ်လာနဲ့ပြန်တွက်ရင်တော့ အားလုံး သက်သာပါတယ်။
littel Morrel ၊ little Jerome
ကျွှန်းပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့ စည်းထားလို့တံထားတွေ များပါတယ်။
စင်ဒီကရော့ဖို့ ဒ်နဲ့စန်းထွန်း
Toyota ကားစက်ရုံတွေ တွေ့ ခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးကတော့ မြန်မာပြည်ထက် သာပေမဲ့ အမှိုက်ပုံတွေ၊ လက်ပွေ့ ဂျာနယ်ရောင်းသူတွေ၊ တွန်းလှည်းနဲ့မုန့် ရောင်းတာ၊ ထင်တိုင်းကြဲ ဆိုင်ကယ်မောင်းကြတာတွေကတော့ မြန်မာပြည်နဲ့တူတယ်။ Jannet နဲ့Miria ကလည်း ဖိလစ်ပိုင်ကို ရောက်နေသလိုမျိုးတဲ့။
မြန်မာပြည်မှာတုန်းကတော့ အကြီးကြီးတွေဆို အိပ်စပို့ လို့အိပ်မစပို့ တဲ့ အသေးလေးတွေ တွယ်ခဲ့ရတာကလား။ ဒီရောက်တော့ ငတ်တာတွေကို အတိုးရော၊ အရင်းပါ ပေါင်းပြီး စားခဲ့တယ်။
စီးပွားရေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်တဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေကို နှိပ်ကွက်တာများ တရုတ်နာမည် ပေးခွင့်မရှိ၊ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုစာပေ ထုတ်ခွင့်မရှိ။ ခုတော့ အများကြီး တော်လာပြီ။ ဘော်နီယို ကျွှန်းမကြီးကနေ Mount Kinabalu ရှိတဲ့ Sabah ပြည်နယ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို အငြင်းပွားရာကနေ ပိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ မလေးရှားလက်ထဲကို ပေးလိုက်ရတာပါ။ မလေးရှားနဲ့အစာမကြေတာများ ဘောလုံးပွဲမှာ မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှား တွေ့ ကြရင် ချကြတာပဲတဲ့။ မလေးရှားကလည်း အင်ဒိုကို နိုင်လို့ဗိုလ်ဆွဲရင် နောက်နေ့ ကို ရုံးပိတ်ရက် အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အောင်ပွဲခံကြရော။ အင်ဒိုတွေက မလေးမှ ဆော်တာ တို့ ရွှေညန်မာများတော့ အင်ဒိုထက်သာတယ်။ ကမ္ဘာ့ ဖလားဝင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်၊ ဒဏ်ငွေတပ်ခံရတဲ့အထိ ဆော်တာ။
Mount Kinabalu အကြောင်း သိသလောက်လေး လျှာရှည်ရရင် ထိန်ထိန်က Mount Kinabalu က အရှေ့ တောင်အာရှအမြင့်ဆုံးတောင်လို့ဆိုပါတယ်။ ပထဝီသင်တုန်းက မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားရှိ ရေခဲလွှမ်းသော ခါကာဘိုရာဇီတောင်သည် အရှေ့ တောင်အာရှ၌ အမြင့်ဆုံးတောင်ဟု စာအံဖူးသော စန်းထွန်းသည် ဂူးဂယ်ကြီးကို သက်သေအရာ၌ထားကာ Mount Kinabalu သည် အမြင့်ဆုံးတောင်မဟုတ် မြန်မာပြည်မှ ခါကာဘိုရာဇီတောင်သည်သာ အရှေ့ တောင်အာရှ၌ အမြင့်ဆုံးတောင်ဟု သတ်သေ အဲလေ သက်သေပြလိုက်နိုင်ဘူးသည်။
ခါကာဘိုရာဇီ from Google
ခါကာဘိုရာဇီတောင်ကား တက်ရန် အလွန်ခက်၏။ သို့ သော် Mount Kinabalu ကား တက်ရန်မခက်။ ဘာအပင်မှ မပေါက်သော တောင်ဂတုံးကြီး ဖြစ်သည်။ သို့ သော် တောင်တက်၊ တောင်ဆင်းချိန် ၂ ရက်ကြာသည်။ တောင်ထိပ်ပေါ်မှ တိမ်တွေဖုံးနေသာ ရူခင်းသည် အရမ်းလှသည် ရူမဝ။ တခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖူးသင့်သည်ဟု ထိန်ထိန်မှ ဆိုသည်။
credit to Win Win Maw
၂၀၀၂ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် ပုဂံ၊ ညောင်ဦး၊ ပုပ္ပား ခရီးထွက်စဉ်က ပုပ္ပာတောင်မကြီးသို့အောင်ကြီးတို့အုပ်စုပြီးလျှင် အရင်ရောက်သော မိန်းကလေးအုပ်စု (ဝေ၊ အိကေ၊ စန်းထွန်း) တွင် ဖြစ်၍ တောင်မကြီးသို့အရင်ဆုံးရောက်သောမိန်းကလေးအုပ်စုဟု လက်မထောင်ကာ လေကျယ်လေ့ရှိသော စန်းထွန်းသည် Mount Kinabalu တက်မည်ဟု ကြုံးဝါးသည်။ တမြန်နေ့ က ဂူအောင်းနေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၍ HyBee သို့၁နာရီခန့် အညောင်းပြေအညာပြေ လမ်းလျှောက်သော စန်းထွန်းသည် ပြန်ရောက်သောအခါ၌ကား ပက်လန်လက်လေသည်။ တောင်၂ရက်တက်ဖို့ ကား ဝေးစွ။ ၂နာရီပင် လမ်းမလျှောက်နိုင်။ ငါ၏ ဒူးသည် ငါ့ကို သစ္စာဖောက်လေပြီတကား။
တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် ဝေ၊ မြတ်မွန်၊ စန်းထွန်း၊ အိကေ
လာဘ်စားတာက နေရာတိုင်းမှာ။ လူဦးရေများတဲ့ မြို့တော် ဂျာကာတာမှာ ဟိုတယ်မှာ ဗုံးဖောက်ပြီး အကြမ်းဖက်တာကို အစိုးရက ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ပါဘူးတဲ့။ လုပ်အားခ သက်သာလို့စီးကရက်စက်ရုံတွေ များပါတယ်။ တလောက ၂၊ ၃ နှစ် ကလေးလေးတယောက် ဆေးလိပ်မသောက်ရရင် မအိပ်ဘူးဆိုတဲ့ Youtube ပြန့် သွားလို့အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ အဲဒီဗွီဒီယိုက အင်ဒိုနီးရှားရဲ့စီးကရက်ပြသနာကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ပါတယ်။
အင်ဒိုတွေက ပညာရေး လိုက်စားပါတယ်။ ရုံးက အင်ဒို၃ယောက်မှာ ၂ယောက်က မာစတာတက်တယ်။ NUS တုန်းကလည်း အင်ဒို၃ယောက်။ ဖားတွေ ကျောင်းတက်တာ မတွေ့ ပါဘူး။ ဖားတွေက နည်းနည်းပျင်းတယ်။ အင်ဒိုတွေကတော့ အလုပ်ကြိုးစားတယ်။ ကိုယ်နဲ့ကြုံဖူးတဲ့ ဖား၊ အင်ဒို၊ မလေး၊ တရုတ်တွေကတော့ ဆင်းရဲတဲ့ တိုင်းပြည်က လာတာတူတော့ စိတ်ရင်းကောင်းတယ်။ အိန္ဒိယတွေကတော့ နည်းနည်းညစ်တယ်။
နဂါးမောက်သီးခြံကို သွားလည်ကြတယ်။ ခုမှ အပင်ကို မြင်ဖူးတာ။ နေ့ လည်စာကို စားပြီး ငါးတွေကို ပင်လယ်ရေမှာ ပိုက်ကွန်နဲ့လှောင်ထားပြီး မွေးတာကို ကြည့်ပါတယ်။ မထူးဆန်းပါဘူး ဒီက ဟိုင်းကြီးကျွှန်းသူ။ လေကလည်း လတ်ဆတ်ပြီး ပင်လယ်နံ့ ရတယ်။
အလကားမြည်းလို့ ရတာ အကုန်မြည်းပါတယ် :) ။ လက်ဆောင်မုန့် တွေ ဝယ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးကြော်၊ ပိန္နဲသီးခြောက်၊ ငါးမုန့်အကုန်ကောင်းတယ်။
ဟိုတယ်ကတော့ ကြယ်လေးပွင့်အဆင့်ရှိ သင်္ဘောကြီးသဏ္ဍန်ဆောက်ထားတဲ့ Pacific Palace Hotel ပါ။ မတ်ဆာ့က ဈေးသက်သာပါတယ်။ ဟိုတယ်တွေက ဈေးနည်းနည်းကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။ ဂိုက်အညွှန်ကောင်းမှုနဲ့မတ်ဆာ့ကြပါတယ်။ အစကတော့ သက်သာပြီး နေလို့ ကောင်းပေမဲ့ နောက်နေ့ ကျတော့ တကိုယ်လုံး ကိုင်ရိုက်ထားသလိုပါပဲ။
နာဂိုယာ ရှော့ ပင်းမောကို သွားပါတယ်။ နာဂိုယာဆိုတာ ဂျပန်ပြည်တောင်ပိုင်းက မြို့နာမည်ပါ။ တခြားမောလ်တွေက မလုံခြုံလို့မသွားပါနဲ့ တဲ့။ တက္ကစီကို ဟိုတယ်ဆိုရင် ဟိုတယ်ဂိတ်၊ လျှော့ပင်းမောလ်ဆိုရင် လျှော့ပင်းမောလ်ဂိတ်က ငှားမှ စိတ်ချရပါတယ်။ မစီးခင် ဈေးဆစ်ရပါတယ်။ တက္ကစီတွေမှာ မီတာမရှိပါ။ ဈေးကလည်း ပိုတောင်းတာမို့ကျသင့်ငွေကို စုံစမ်းထားသင့်ပါတယ်။
ညနေစာကို ဟိုတယ်ဘေးနားက ဆိုင်တွေမှာပဲ စားဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်စာတွေ တကယ်ကောင်းတယ်။ Louis Vilton တွေက ပေါလိုက်တာ။ ကိုရီးယားမိတ်ဆိုရင် ဈေးကြီးပြီး တကယ်အစစ်အတိုင်းပါပဲတဲ့။ ချည်ထိုးဘေးလွယ်အိတ် ဝယ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက အဲဒီလိုမျိုးဆို လှည့်တောင်မကြည့်။ နိုင်ငံခြားဖြစ်မှ။ ခုတော့ ဟမ်းမိတ်ကလေးတွေ ပိုကြိုက်နေတယ်။
credit to Wynn Zayar
ကိုရင် နဲ့မဒိုးကန် :P
အင်ဒိုနီးရှားက ဘာလီကျွှန်းကတော့ နာမည်ကြီးပါတယ်။
ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမူအမွေအနှစ်လက်ရာအဆောက်အဦးတွေ တွေ့ ရပါမယ်။
မဟာယနဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားခဲ့တဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်တဲ့ ဂျာဗားကျွှန်းက Borobudur ကတော့ UNESCO ရဲ့ World Heritage Site ဆိုဒ်မှာ ပါဝင်ပါတယ်။
Batam ကတော့ လည်ပတ်စရာ မရှိလှပါဘူး။ ပင်လယ်စာကောင်းကောင်း ရနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး အင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်ဝယ်ဖို့ဈေးမေးကြည့်တာ စလုံးထက် ဈေးများနေလို့စလုံးကနေပဲဝယ်ပြီး အင်ဒိုပြန်လက်ဆောင် လုပ်လိုက်တော့မယ်။
Bintam က အပန်းဖြေ Resort ကျွှန်းပါ။ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေ ဝင်လို့ မရပါဘူး။ တကယ့်ကို အပန်းပြေစေမဲ့ နေရာလေးပါ။
credit to Ng Thieng Thieng
အမှတ်တရ ခရီးလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁။
ဟောင်ကောင်သွား တောလား _ ၃
ဟောင်ကောင်သွား တောလား _ ၂